မိတ်ကပ်မပါတဲ့ အိမ်နေရင်းပုံစံလေးနဲ့တောင် ကြည်လင်တောက်ပပြီး ကိုရီးယားမလေးလိုလှနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် - Cele Connections
မိတ်ကပ်မပါတဲ့ အိမ်နေရင်းပုံစံလေးနဲ့တောင် ကြည်လင်တောက်ပပြီး ကိုရီးယားမလေးလိုလှနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid – 19 ရောဂါကြောင့် သူမရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်နားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်က (၂၀၂၀)အတွင်းမှာ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် အိမ်မှာပဲ အနားယူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်က အိမ်မှာနေနေပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ မျက်နှာလေးက ကိုရီးယားမလေးတစ်ယောက်လို နုဖတ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဝတ်မှုံရွှေရည်က “အိမ်မှာနေနေကြရဲ့လား ? ကစ်တော့ သင်္ကြန်တတွင်းလုံး ဘုရားရှိခိုး စာဖတ် ရုပ်ရှင်ကြည့် မုန့်စား ဖုန်းသုံး သီချင်းနားထောင်နဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းဖြစ်တယ်။ အားလုံးလည်းဘေးကင်းအောင် အိမ်မှာနေကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ P.s နည်းနည်းတော့ပျင်းရိ ခွေခေါက် နေလားမသိ ပုံတွေက။ အလွမ်းပြေ လေးတင်လိုက်သည် ဟိဟိ ❤️” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။
ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ အိမ်မှာနေနေတဲ့ ပုံစံလေးကတောင် အရမ်းလှတာပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရှေးဘဝကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ သဘာဝအလှလေးကိုကြည့်ပြီး အားကျစိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
မိတျကပျမပါတဲ့ အိမျနရေငျးပုံစံလေးနဲ့တောငျ ကွညျလငျတောကျပပွီး ကိုရီးယားမလေးလိုလှနတေဲ့ ဝတျမှုံရှရေညျ
နိုငျငံကြျော မငျးသမီး ဝတျမှုံရှရေညျကတော့ လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ Covid – 19 ရောဂါကွောငျ့ သူမရဲ့ အနုပညာလုပျငနျးတှကေို ရပျနားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝတျမှုံရှရေညျက (၂၀၂၀)အတှငျးမှာ နာမညျကွီး ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးဖို့ စီစဉျထားပမေယျ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနတှေကွေောငျ့ အိမျမှာပဲ အနားယူနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝတျမှုံရှရေညျက အိမျမှာနနေပေမေယျ့လညျး သူမရဲ့ မကျြနှာလေးက ကိုရီးယားမလေးတဈယောကျလို နုဖတျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ဝတျမှုံရှရေညျက “အိမျမှာနနေကွေရဲ့လား ? ကဈတော့ သင်ျကွနျတတှငျးလုံး ဘုရားရှိခိုး စာဖတျ ရုပျရှငျကွညျ့ မုနျ့စား ဖုနျးသုံး သီခငျြးနားထောငျနဲ့ပဲ ဖွတျသနျးဖွဈတယျ။ အားလုံးလညျးဘေးကငျးအောငျ အိမျမှာနကွေမယျလို့ယုံကွညျပါတယျနျော။ P.s နညျးနညျးတော့ပငျြးရိ ခှခေေါကျ နလေားမသိ ပုံတှကေ။ အလှမျးပွေ လေးတငျလိုကျသညျ ဟိဟိ ❤️” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပုံလေးတှကေို မြှဝပေေးထားပါတယျ။
ဝတျမှုံရှရေညျကတော့ အိမျမှာနနေတေဲ့ ပုံစံလေးကတောငျ အရမျးလှတာပဲနျော။ ပရိသတျကွီးလညျး ရှေးဘဝကုသိုလျကောငျးတဲ့ ဝတျမှုံရှရေညျရဲ့ သဘာဝအလှလေးကိုကွညျ့ပွီး အားကစြိတျတှေ တဖှားဖှားဖွဈလာမယျ ထငျပါတယျ။
“ပရိသတ်တွေကို စိန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူပြောတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို ဖြေရှင်းလာတဲ့တိုင်ရွန်”
ပရိသတ်တွေတော်ရုံမသိသေးတဲ့ သူမရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်းလေးကို အမှတ်တရပြောလာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
သားသမီးတွေမပါပဲ နှစ်ယောက်တည်းမျက်နှာချင်းဆိုင် Dinner စားပြီး Ro နေကြတဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ